Tombontsoa vokatra - Ningbo Zhenhua Electrical Equipment Co.Ltd.
Home > Momba ANAY > Ny tombony amin'ny vokatra
Mifanaraka amin'ny lanjan'ny "fikatsahana fahambinana, fanaovana mpisava lalana ary manompo ny firenena" ny orinasa, dia "manorina ny marika kilasy voalohany any Sina" ho tanjona, tratrarin'ny "fahatsorana sy mandrakizay" ho an'ny mpanjifa, ny vokatra, ny asa ary ny fiaraha-monina ary miezaka hamorona vokatra an-dakilasy, serivisy kilasy voalohany ary laza ho an'ny kilasy voalohany mba hanompoan'ny mpanjifa manana andraikitra ambony sy iraka. Manompo ny firenena ny fiarahamonina.
Ny orinasa dia nametraka rafitra kalitao sy lanja IS09001, rafitra tontolo iainana IS014001 ary rafitra ara-pahasalamana sy fiarovana ara-pahasalamana 0HSAS18001 araky ny foto-kevitra momba ny «teknolojia taratra, kalitao avo lenta, fiarovana ary fitokisana, tompon'andraikitra hatramin'ny farany». Izy io dia namolavola, nanamboarana, nisedra, manome, manompo, tontolo iainana, fiarovana, fahasalamana ary rohy hafa, ary koa "olona" Ny singa ara-tsindrona tsirairay dia miitatra amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny fitantanana kalitaon'ny orinasa, mihazakazaka amin'ny fizotran'ny famokarana sy ny fandidiana, feno mitazona ny kalitao ankapobeny, fandraisana anjara feno, ny fitantanana fizahana ary mifehy tsara ny kalitao vokatra.
Amin'ny alàlan'ny fanalavana ny rafitra fitantanana kalitao ankapobeny, fampiharana ny rafi-piasana injeniera momba ny kalitao, ary am-pahavitrihana am-pahavitrihana ny "fepetra kalitaon'ny fanaraha-maso ny vokatra sy ny fepetra", ny orinasa dia miantoka fa ny tsirairay dia tompon'andraikitra amin'ny kalitaon'ny vokatra, ary mampiroborobo ny fitohizan'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra. Ny orinasa dia manao hetsika «Quality Month» isan-taona, manamafy ny fiofanana momba ny kalitao sy ny asa fanaovana kalitao kalitao, fanatsarana an-tsakany sy an-davany ny fahafantarana ny kalitaon'ny mpiasa, ny fahalalana kalitao sy ny kalitao momba ny kalitao, ny fisoloan-tena am-pahavitrihana "ny toetra dia ny toetra" kolontsaina kalitao, amin'ny ankapobeny dia manatsara ny fahatsiarovan'ny mpiasa, ny fahatsiarovan'ny mpiasa, fitsipiky ny fitantanana kalitao ary mazoto mitana ny kalitao vokatra.